Khadka wireless-ka ee wireless-ka ah ayaa amaan ah mise maya? | Androidsis
Khadka wireless-ka ee wireless-ka ah ayaa amaan ah mise maya?
Inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin ilaa bilowgii sanadkan in labadaba Xiaomi sida Motorola yeelan doonaan lacag la'aan wirelessTani waa wax la isla dhexmarayay muddo dheer. Tan iyo markii uu yimid Kicinta bilaa wireless qalabkayaga, halkaas sano 2012, tiknoolajiyaddan ayaa loola jeeday horumar farsamo oo weyn. Waqtigaas waxay ahayd horumar dhab ah. Tiknoolajiyad taas ballanqaaday inaan ka takhalusi doono fiilooyinka mar iyo dhammaanba, laakiin taasi ma ahayn sidaas.
Sidaan aragnay, ku dhowaad 9 sano ka dib, tirada ugu badan ee isticmaaleyaashu waxay sii wadaan inay isticmaalaan xeedho caadi ah Iyada oo fiilo leh. Dad aad u tiro yar ayaa maanta isticmaala tikniyoolajiyadda bilaa-waayirka ah si ay qalabkooda uga qaadaan. The sabab had iyo jeer waa isku mid, xitaa haddii taleefannada casriga ahi leeyihiin tiknoolajiyad lacag la'aan ah, soosaarayaasha kuma jiraan xeedhooyinkan markay wax iibsanayaan. Inaad si gooni ah u iibsato, haysato mid sidoo kale shaqeyneysa, ayaa ka dhigtay teknoolojiyaddan inaysan dhammaystirin.
1 Xiaomi iyo Motorola waxay soo bandhigaan "hadda" wireless wireless lagu xirayo
2 Tallaabooyin nabadgelyo oo xoogaa mugdi ku jiro
Xiaomi iyo Motorola waxay soo bandhigaan "hadda" wireless wireless lagu xirayo
Kulligeen waan ka wada caddaynay waxa ku-dallaca wireless-ka. Waxaan ku dhejinay telefonada gacanta casriga ah saldhig, mahadnaqa xiriirka iyo tikniyoolajiyad loo sameeyay awgeed, aaladdu waxay bilaabeysaa inay soo buuxiso baterigeeda iyadoon ku xirneyn. Hadda labadaba Xiaomi sida Motorola (iyo laga yaabee dhowr shirkadood oo dheeri ah) Waxay bixiyaan lacag-bixin wireless ah oo aan u baahnayn wax xiriir ah. Markaa waxay ka dhigi kartaa taleefannadeennu lacag meel fog. A priori waa sheeko xiiso leh runtii taasi waa hubaal inay gaari karto beddel habka aan u isticmaalno taleefannadeenna. Laakiin waxay umuuqataa inay tani dhici doonto muddada fog.
Mid ka mid ah welwelka taasi waa lagu celceliyaa inta badan isticmaaleyaasha waa haddii ay tahay fog ku amraya awoodo waxyeelo u leh caafimaadka. Iyadoo aan ujeedadu ahayn in waran la jebiyo midkoodna labadan shirkadood, waxay umuuqataa macquul in haa. Waxaan u qaadaneynaa in tiknoolajiyad horumarineed illaa heer ay ku dhawaaqeyso si xamaasad leh oo ah wax cusub oo aan dhowaan heli doonno, yeelan doonaan dhammaan daraasadaha iyo tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ahaato 100% amaan. Laakiin iyada oo aan laga fahmin wax ku saabsan sida lacagta loo sameeyo, ama farsamadeeda, welwelka waa la fahmi karaa.
Tallaabooyin nabadgelyo oo xoogaa mugdi ku jiro
Muhiimadu waxay tahay in kastoo labada shirkadoodba isku soo beegmeen bixiya tikniyoolajiyaddan, horumarka in mid kastaa sameeyey gebi ahaanba way ka duwan tahay. Adigoon si qoto dheer u guda galin, labadaba ku andacoodaan in lacag bixinta wireless-ka ee fog ay waxyeello u lahayn aadanaha. Waxayna ku nuuxnuuxsanayaan taas isticmaalkeedu gabi ahaanba waa aamin. Tikniyoolajiyadda fog ee lacag-bixinta wireless-ka weli si buuxda looma dhammaystirin si loogu bandhigo dadweynaha guud. Waan ognahay taas wixii ka mid ahaa caqabadaha ugu muhiimsan, caqabadaha jireed, ayaa si guul leh looga gudbay. In kasta oo ay hore u ahaan jirtay "dhibaato", lacag-soo-saarista ayaa horay u jirtay xawaaraha kuma saameyn ama waa laga gooyey xitaa haddii ay jiraan wax u dhexeeya xeedho iyo taleefanka casriga ah.
Dareenkan, tan iyo bayaan ay soo saartay Motorola, waxaan ka soo saari karnaa xoogaa tallaabooyin amniga ah. Ka mid ah macluumaadka aan macquul ahayn, waxay raacaysaa taas haduu qofku jidka maro inta udhaxeysa qalabka iyo isha lacag bixinta, tan si toos ah ayuu u joogsan doonaa. Hadalkan, oo ka fog tixgelinta dad badan, ayaa ka dhigi doonta inay rumaystaan xitaa su'aalo dheeraad ah. Waa maxay sababta tan loogu tixgelinayo inay tahay tallaabo amni? Ma leedahay wax khatar ah? Xilligan dooda amniga ayaa loo adeegaa, iyo in kasta oo aynaan haysan suurtogalnimada in meel fog laga baaro wireless-ka, haddana ma lihin wax kale oo aan ka ahayn inaan sugno warar cusub oo aan u dulqaadno si ay dhakhso ugu gaarto dhammaan isticmaaleyaasha.
Laga soo bilaabo kalsoonida tiknoolajiyada cusub ee horumarinta, waxaan rajaynaynaa in wireless ku shubida fog ay ku dhamaaneyso mid amaan ah. Iyo wixii ka sarreeya, waxaan sidoo kale rajeyneynaa inaan marin u helno mar dhow adigoon bixin qarash badan. Runta ayaa ah naga qaado moobilkeena wireless, lagu daray adigoon sii deynWaxay noqon laheyd horumar dhab ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Khadka wireless-ka ee wireless-ka ah ayaa amaan ah mise maya?
Xiaomi Mi 11 International hadda waa rasmi rasmi Snapdragon 888 iyo 6,81 "WQHD + AMOLED panel